Best Colored Contacts: manfaat daun kelor bagi tubuh
manfaat daun kelor bagi tubuh Ọ bụrụ na ị na -anụ epupụta nke Moringa , ikekwe ekere omimi AURA . Ma, ị mara na uru nke Moringa epupụta tụgharịa si dị mma nke ukwuu n'ihi na ike nke ahu . N'ụzọ kwere nghọta n'ihi na ụfọdụ n'ime Moringa akwukwo eji nke -asa nke ozu . Ma ọ bụrụ na unu na- agba nkịtị na -eji Moringa akwukwo a N'ezie ga- iju ọ bụrụ na ị na-ahụ epupụta nke Moringa mere nri .
Moringa epupụta na esie ya tụgharịa si nwee adụ udidi ka mushrooms nnọọ ọhụrụ uto ke edeme. Moringa epupụta na- na-emekarị ka esie n'ime akwukwo nri ọnụ ndị ọzọ ọhụrụ ọka kwa na-eto eto na- iwesa n'ụbọchị. Ọ bụrụ na ị ma ekesitiede sensashion nke Moringa akwukwo akwukwo nri , o nwere ike iyi ya site ugbu a .
Ke adianade mere tọrọ ụtọ akwukwo nri ọnụ , ọ na- ekwukwa n'akwụkwọ nwere uru Moringa epupụta dị mma maka ahu kita.Ternyata Moringa epupụta ọzọ vitamin A etoju tụnyere carrots . Na mgbakwunye na vitamin A, moringa akwukwo nakwa dere vitamin C na vitamin E. na-esonụ bụ ọdịnaya nke Moringa doo ha tụnyere ihe ndị ọzọ eke ihe , dị ka e hotara site na kompasiana.com .
Vitamin A 6,8 mg ( 1.8 mg ke carrots )
Calcium 440 mg ( 120 mg dị na mmiri ara )
Potassium 259 mg ( 88 mg ẹdude ke unere )
6,7 mg nke protein ( mmiri ara ehi ma ọ bụ yogọt nwere 3.1 mg )
Vitamin C 220 mg (30 mg ẹdude ke oroma )
Dị ka e dere, wikipedia e nwere ụfọdụ isi uru Moringa epupụta ndị dị mma nke ukwuu n'ihi na ike gị kwa ubochi , dị ka:
Enwekwu ozu si n'okike na-eguzogide
Ume ọhụrụ anya na ụbụrụ
Ubara cell Ọdịdị nke ahụ ozu
Na-abawanye na ọbara cholesterol ndammana
Belata wrinkles na edoghi na akpụkpọ
Ubara nweghị ọrụ nke umeji akụrụ
Ịnọgide na-enwe ozu si dịghịzi usoro
Mma mgbasa usoro gbasiri ike
Na-enye mmetụta nke mkpokọta ike
Na akwado nkịtị sugar etoju nke ahu
Na ọtụtụ uru ma nrụpụta ọrụ nke Moringa doo n'elu, ọ bụ nnọọ nzukọ ma ọ bụrụ na -adị kwa ụbọchị ndụ mgbe eleghara ihe moringa epupụta . Ọ bụ ezie na onye kpọrọ ndị Moringa doo dị ka onye ọzọ aka imeri nsogbu nri oriri na-edozi ebe ọ bụ na 1988. Ya mere, ọ bụrụ na ị ka na- hesitant na -erepịaghị Moringa akwukwo ?
Diposting oleh Lisa Fernandez di 00.38